अनशन तोड्नुहोस् अब नयाँ तरिकाले लडौंलाः सभापति देउवा - Everest Dainik - News from Nepal
अनशन तोड्नुहोस् अब नयाँ तरिकाले लडौंलाः सभापति देउवा
काठमाडौं, माघ १७ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त्रिवि शिक्षणमा २३ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई भेटेका छन् ।
डा. केसीलाई भेटेर देउवाले अनशन तोड्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘सरकार असहिष्ण भयो। हामी नीतिगतरुपमा बाँधियौं। अनशन तोड्नुहोस् नयाँ तरिकाले लडौंला’, उनले भने, ‘दुवै संसद अवरुद्ध गरेर हामीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक रोक्न खोजेका थियौं तर हाम्रो बल पुगेन। हामी सँधै तपाईको साथमा छौं।
याे पनि पढ्नुस सरकार माफियासँग बिकेको भन्दै डा. केसीले निकाले विज्ञप्ती, सत्याग्रहको घोषणा
ट्याग्स: deuba, Dr Govind kc